Qalabka Qodista Wadada Warshadaha: Wabiyada, Kanaallada, Harooyinka, Maraakiibta
Dekedaha, Dekedaha, iyo Marin-biyoodka
Derejooyinku waxay u shaqeeyaan sidii loo ilaalin lahaa qoto-dheerida dekeddayada, dekedaha, iyo marinnada biyaha ee maraakiibta. Ku qaadista rakaabka iyo badeecadaha biyo aad ayey uga jaban tahay socodka wadada - gaar ahaan meelaha soo koraya. Iyadoo ay sii kordheyso tirada dadweynaha adduunka waxaa jiri doona baahi sare oo xagga saadka amni, dhaqaale, iyo biyo-qabad leh sanadaha soo socda.
Ellicott 'yar yar iyo dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo nuugi kara goynta nuugista ayaa si fiican ugu habboon dayactirka dekedaha maxalliga ah, dekedaha, iyo biyo mareenka iyada oo aan loo eegin in mashruucu yahay magaalo ama meel fog, kuleyl ama barafoobay.
Ellicott waxay bixisaa dhowr nooc oo qodax ah oo caan ku ah mashaariicda qodista marin biyoodka adduunka. Kooxdayada iibinta aqoonta leh ayaa kula shaqeyn doonta si loo ogaado qalabka sida ugu fiican ugu habboon baahidaada mashruuca.
Qodista wabiga waa isticmaalka ugu badan ee loo adeegsado qalabka ceel-gooye ee Ellicott. Mashaariicdani way ku kala duwanaan karaan ujeedada iyo baaxadda. Ellicott® waxay siisaa noocyo kaladuwan oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah mid kasta oo ka mid ah xaaladaha gaarka ah. Mashruucyada qodaya wabiga waxaa loogu talagalay in lagu maareeyo qoto dheer kanaalka, loo bixiyo yareynta daadadka, baabi'inta walxaha wasakhaysan, qoto dheer marinada marinka, iyo joogtaynta, dadaallada deegaanka.
Bulshooyinka ku teedsan webiga ayaa u nugul daadadka sanadlaha ah xilliyada roobabku da’aan. Haddii wabiga si firfircoon loo maareynin dhoobada, ciidda iyo qashinka ayaa ururi kara oo sameyn kara dhalo. Haddii dhacdo muhiim ah oo roob da 'dhacdo ay dhacdo jiingad urursan waxay yareyn kartaa qulqulka biyaha, webiguna wuxuu ka kici karaa dusha qararka iyo guryaha daadadka ku leh aagga ugu dhow.
Naqshadeynta gawaarida xamuulka ee Ellicott wuxuu u oggolaanayaa dawladaha hoose iyo qandaraasleyaasha inay si deg deg ah ugu daadgureeyaan biyahooda meel kasta si ay si dhaqso leh ugu soo celiyaan kanaalka si qotodheer iyo qulqulka biyaha. Kaddib marka mashruuc dhamaado, qulqulaha la qaadi karo ayaa si dhaqso leh loo rari karaa oo loo keydin karaa meel ka baxsan ilaa looga baahan yahay mar labaad mashruuca xiga.
Baro waxbadan oo ku saabsan daadinta webiga.
Dhismaha Sediment waa mushkilad dhibaato keenta oo sababa qotodheer iyo arrimaha tayada biyaha ee harooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dadku sameeyay. Dhismaha Sediment ayaa saameyn ku yeelan kara nashaadaadka madaddaalada iyo nolosha badda. Intaa waxaa u dheer, orodka ka socda horumarada dhow ama mashaariicda dhismaha ayaa waliba sii wasakheyn kara biyaha harada dhexdeeda.
Haddii aan la helin qodista dayactirka joogtada ah, guryaha harooyinka ayaa hoos u dhici kara qiimaha maaddaama marin-u-helidda dekeddu hoos u dhacayso, biyaha nadiifka ahna waxay noqdaan kuwo mugdi ah. Maaddaama darxumo iyo nafaqooyin ay dhaafeen haro, natiijadu waxay noqon kartaa dhir aad u culus, algae-na wey dhismaan - ugu dambeyntiina waxay horseedaa xaalad cuncun iyo dhimasho kalluunka maxalliga ah sababtoo ah hypoxia ama oksijiin la'aan. Dredging wuxuu ka hortagi karaa eutrophication-ka sidoo kale wuu rogi karaa habka kiisaska badankood.
Qulqulka Ellicott waxaa loo dhisay in lagu maareeyo harada harada iyo nadiifinta waxyaalaha wasakhaysan. Baahida loo qabo adeegyada qulqulka harada ayaa sii kordhaya adduunka oo dhan iyadoo magaalooyinku dib u soo celinayaan harooyinka gudaha ee dalxiiska isla markaana horumariyayaashu waxay ka dhisaan dhinaca xeebta.
Baro waxbadan oo ku saabsan daadinta harada.
Ku haynta dariiqyada marinnada dekeddu inay furan tahay ama abuurto xarun cusub waxay ka faa'iideysan kartaa dhaqaalaha maxalliga heerar badan. Bixinta joogtada ah ee dayactirka waxay xaqiijineysaa in maraakiibta si xor ah ugu dhex gali karaan kana baxaan marinnadaas iyada oo aan wax dhibaato ah laga keenin. Ururinta bacaadka, cammuudda, iyo waxyaabaha kale ee qulqulka waxay horseedaa maraakiibta ordaya, dillaaca burburay, arrimaha maraakiibta. Mashaariicda shaqo ee la baabi'iyay ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo qotoda dheer.
Ilaalinta qoto dheerida badda, ha ahaato mid gaar ama mid dawladeed, waxay muhiim utahay ka ilaalinta maraakiibta ilaaliya waxyeelada. Qulqulka joogtada ah wuxuu xaqiijiyaa in harooyinka ay si xor ah ugu dhex socon karaan marinnada iyo arooyinka la'aanteed. In la ilaaliyo marina waxay faa'iido u leedahay labadaba meheradaha iyo cilmiga deegaanka si ay uga gudbaan meesha qulqulaya.
Dhisidda shabagyada, ciidda, iyo waxyaabaha kale ee dekedaha ayaa horseedaya doomaha socda, jaranjarada waxyeello ka soo gaarto, arrimaha badda, iyo ganacsigii oo ku lumay marinas. Haddii guurguur u baahdo ugu yaraan hal mar labadii sanaba mar ayaa xeer-hoosaadku sheegayaa inay macno badan u leedahay dhaqaale ahaan lahaanshaha iyo socodsiinta qulqulka halkii ay ka kireyn lahaayeen qandaraasle.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kala sooca marina.
Kordhinta ganacsiga caalamiga ah ayaa horseeday koboc aad u ballaaran oo xagga gaadiidka badda ah, oo ay kujirto marinnada marinnada ee sida saxda ah loo dayactiray oo muhiim u ah ganacsiyada adduunka. Haddii kanaalka uu noqdo mid aan la mari karin, maraakiibta iyo xamuulka ay shirkaduhu ku tiirsan yihiin ayaa joogsada gebi ahaanba.
Ellicott Swinging Steder dredge si ula kac ah ayaa loo dhisay si loogu shaqeeyo wadiiqooyin yaryar iyo kanaallo. Meerahan la isku halleyn karo uma baahna silig & barroosinno inay shaqeeyaan sidaa darteedna way sii wadi karaan inay shaqeeyaan maadaama maraakiibta kale ay si xorriyad leh ugu sii gudbayaan kanaalka oo ay faragelin yar ku hayso.
Sidee loo Kala Bixiyaa Wabiga Salado ee May Badbaadiso Buenos Aires
Dayuuradda Feeet ee Venezuelan waxay dhistay Dhaqaale